Roman Reigns amin'ny antony niverenan'i Brock Lesnar tao amin'ny WWE SummerSlam - Wwe
Rehefa avy lavitra ny WWE nandritra ny herintaona sy tapany dia niverina i Brock Lesnar taorian'ny hetsika lehibe nataon'ny SummerSlam. Nitsangana nifanatrika tamin'ny Roman Reigns ny Beast Incarnate talohan'ny nivoahan'ny peratra The Universal Champion.
Ny fiverenan'i Lesnar dia nahatonga ny tontolon'ny tolona ho sahirana, satria tsy nisy nanantena ny tompon-daka eran'izao tontolo izao taloha hiverina any WWE ato ho ato. Niseho tamin'ny fanontana tamin'ny WWE's The Bump tamin'ity herinandro ity, Roman Reigns dia nizara ny eritreriny momba ny fiverenan'i Lesnar tamim-pahagagana tao amin'ny SummerSlam.
'Heveriko fa te hanana endrika tsara indrindra amin'ny zava-mitranga eto izy, Tompondaka Iraisam-pirenena natanjaka indrindra nanao an'io zavatra io.' Nilaza i Reigns. 'Heveriko fa mahita ny nosy misy ifandraisany toa an'i John Cena izy. Tonga miaraka amina tantsaha iray izy, ny fomba fijery mpivaro-kena dia manohitra ny maha-lehilahy Hollywood azy. Fa eny, fampisehoana izany asa rehetra izany fotsiny, ity fototry ny fahalehibeazana napetrako ity. Ny nataon'ilay Bloodline dia mampiseho hatrany fa laharana voalohany izahay. Te-hiresaka momba izany izy ireo ary ny fametrahana ny resaka amiko fotsiny hanamafisana ny zava-drehetra. '
'Saingy tsy misy olona any ivelany afaka mifaninana amin'ny ataontsika,' hoy hatrany i Reigns. 'Manangana bar izahay, manangana ny fenitra ary heveriko fa i Brock Lesnar, toy ny olon-drehetra ao amin'ity orinasa ity dia te ho anisan'izany izy ireo.'
Toa i Brock Lesnar no mety ho mpanohitra manaraka an'i Roman Reigns. Na dia nifanatrika imbetsaka aza ireo kintana roa taloha, amin'ity indray mitoraka ity dia ho hafa tanteraka ny toe-javatra manodidina ny lalao.
Taloha dia nilalao ny tarehy i Roman raha i Lesnar kosa no voditongotra natanjaka. Niverina ireo andraikitra ankehitriny, miaraka amin'i Reigns ihany koa miaraka amin'i Paul Heyman amin'ity indray mitoraka ity.
ny fomba hisafidianana ny lehilahy marina eo amin'ny roa
Brock Lesnar sy Roman Reigns dia manana tantara maro
ny #HeadOfTheTable mihaona amin'i The #BeastIncarnate .
ny #SummerSlam SHOCKER! @WWERomanRoyals @HeymanHustle @BrockLesnar pic.twitter.com/hyrGWJuOYr
- WWE (@WWE) 22 aogositra 2021
Roman Reigns sy Brock Lesnar no niatrika voalohany tamin'ny lalao lehibe WrestleMania 31 ho an'ny WWE World Heavyweight Championship. Na dia nanomboka ho lalao tokana aza izy io, hatramin'ny farany dia nanjary lalao fandrahonana telo sosona taorian'ny nandefasan'i Seth Rollins ny volany tao anaty kitapo banky. Nandeha niaraka tamin'ny WWE Championship i Rollins tamin'ny farany.
tononkalo malahelo ho an'ny olon-tiana
Lesnar sy Reigns dia WrestleMania 34 ihany koa no nisongadina indrindra, izay niarovan'i The Beast Incarnate tamim-pahombiazana ny Tompondaka Iraisam-pirenena tamin'ny The Big Dog. Herinandro vitsivitsy monja taty aoriana dia nanao lalao famerenana tany Saudi Arabia izy ireo. I Lesnar koa dia nandresy tamin'ity lalao ity saingy tsy nahomby tamin'ny fanoherana an'i Reigns izy rehefa nihaona indray izy roa lahy tao SummerSlam tamin'ny faran'io taona io.
Ny rakitsoratry ny Roman Reigns an'ny Brock Lesnar dia 2-1 amin'izao fotoana izao, saingy mety hiova izany tsy ho ela. Iza araka ny eritreritrao no handresy amin'ny lalao manaraka eo amin'i Lesnar sy i Reigns? Feo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Azafady azafady ny WWE's The Bump ary omeo H / T ny Sportskeeda Wrestling ho an'ny fandikana raha tokony hampiasa ilay teny avy amin'ity lahatsoratra ity ianao
manana namana aho fa tsy misy namana akaiky
nalaina momba ny very, dia nahita ny fomba
ny fomba handosirana ary hanombohana indray
heveriko fa tsy tia ahy intsony izy
nisara-panambadiana i grook brooks sy i trisy yearwood
ny fomba hisarahana maharitra